အရက်ကျေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့သူ အက်ဒရီယာနိုရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
အရက်ကျေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့သူ အက်ဒရီယာနို Adriano ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
30 Aug 2018 . 5:54 PM
အင်တာမီလန်နဲ့ ဘရာဇီးလ် နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အက်ဒရီယာနို Adriano ဆိုတဲ့ အမည်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိနေဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်း ဂိုးသွင်းစက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ၊ ဘရာဇီးလ် ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ အက်ဒရီယာနိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ ဇာတ်သိမ်းက မလှပခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့အတူ စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ ဖလားတွေ ရယူခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူး စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အက်ဒရီယာနို ဘာကြောင့်များ ဇာတ်သိမ်း မလှဖြစ်ခဲ့တာလဲ . .
အဲဒီအကြောင်းကို ဘရာဇီးလ်ရုပ်သံ R7 နဲ့တွေ့ဆုံခန်းမှာ အက်ဒရီယာနိုက အခုလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တယ်။ “ကျွန်တော် ဘယ်လောက်အထိ ခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးပါ။ ကျွန်တော့် အဖေ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော် အရမ်းအထီးကျန်ခဲ့ရတယ်။ အီတလီမှာ ကျွန်တော်က ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော် အရက် စသောက်တော့တာပါပဲ။ သောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ညစ်မှုတွေကို ခဏမေ့ဖျောက်လို့ရပြီး ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ နေရသလို ခံစားမိတယ်။ နေ့တိုင်းသောက်တယ်၊ ဘေးနားမှာဝိုင်၊ ၀ီစကီ၊ ဗော့ဒ်ကာ၊ ဘီယာ ဘာပဲရှိရှိ အကုန်သောက်တာပဲ။
ဘီယာတွေလည်း အများကြီးသောက်ဖြစ်တယ်။ အရက်ကို မဖြတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ အင်တာမီလန်နဲ့ ကျွန်တော် လမ်းခွဲခဲ့ရတော့တာပါပဲ”လုိ့ အက်ဒရီယာနိုက အတိတ်က အမှားတွေကို နောင်တရနေတဲ့လေသံနဲ့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ အက်ဒရီယာနိုရဲ့ အမှားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံးမှာတော့ အက်ဒရီယာနိုနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်။
အက်ဒရီယာနိုက “အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ကျွန်တော် မူးမူးရူးရူးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ မူးမူး အသင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုတော့ မပျက်မကွက် ရောက်အောင် လာခဲ့တာချည်းပဲ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် အသင်းဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေက ကျွန်တော့်ကို လူနာခန်းထဲကို ခေါ်ပြီး အိပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း ကျွန်တော့်မှာ ကြွက်သားဒဏ်ရာရှိနေလို့ဆိုပြီး သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် နားလည်လာတာက ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းတွေဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ သူတို့က ဘာမှ မလုပ်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ကို ပါတီတွေခေါ်၊ မိန်းမတွေနဲ့ ပေးတွေ့၊ အရက်တွေတိုက်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် အနာဂတ်ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ဘရာဇီးလ်ကို ပြန်တဲ့အချိန်မှာ ၀င်ငွေ အများကြီး လျှော့နည်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ ကျွန်တော် ပြန်ရခဲ့ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘောလုံးလောကမှာ အချိန်မတန်ဘဲ နေ၀င်ခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်ပါပဲ။ အက်ဒရီယာနိုလို မဖြစ်အောင် တခြားတခြားသော ဘောလုံးသမားတွေအနေနဲ့ သူ့ကို သင်ခန်းစာယူဖို့ တိုက်တွန်းရင်း . . .
အက်ဒရီယာနိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုများ
အရကျကြေးကြှနျဖွဈခဲ့ပွီး ဇာတျသိမျးမလှခဲ့သူ အကျဒရီယာနို Adriano ရဲ့ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြ
အငျတာမီလနျနဲ့ ဘရာဇီးလျ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးဟောငျး အကျဒရီယာနို Adriano ဆိုတဲ့ အမညျကို ပရိသတျတှေ မှတျမိနဦေးမယျ ထငျပါတယျ။ အငျတာမီလနျအသငျး ဂိုးသှငျးစကျဖွဈခဲ့ဖူးသူ၊ ဘရာဇီးလျ ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို ဆုပျကိုငျခဲ့ဖူးသူ အကျဒရီယာနိုရဲ့ ဘောလုံးသမားဘ၀ ဇာတျသိမျးက မလှပခဲ့တာကိုလညျး ပရိသတျတှေ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အငျတာမီလနျအသငျးနဲ့အတူ စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ ဖလားတှေ ရယူခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးတိုကျစဈမှူး စာရငျးဝငျဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ အကျဒရီယာနို ဘာကွောငျ့မြား ဇာတျသိမျး မလှဖွဈခဲ့တာလဲ . .
အဲဒီအကွောငျးကို ဘရာဇီးလျရုပျသံ R7 နဲ့တှဆေုံ့ခနျးမှာ အကျဒရီယာနိုက အခုလိုပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရငျဖှငျ့ခဲ့တယျ။ “ကြှနျတျော ဘယျလောကျအထိ ခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာ ကိုယျတိုငျပဲ အသိဆုံးပါ။ ကြှနျတေျာ့ အဖေ ကှယျလှနျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ကြှနျတျော အရမျးအထီးကနျြခဲ့ရတယျ။ အီတလီမှာ ကြှနျတျောက ဝမျးနညျးပူဆှေးမှုတှနေဲ့ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြဆနျခဲ့တယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ ကြှနျတျော အရကျ စသောကျတော့တာပါပဲ။ သောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ စိတျညဈမှုတှကေို ခဏမဖြေ့ောကျလို့ရပွီး ကိုယျပိုငျကမ်ဘာတဈခုမှာ နရေသလို ခံစားမိတယျ။ နတေို့ငျးသောကျတယျ၊ ဘေးနားမှာဝိုငျ၊ ဝီစကီ၊ ဗော့ဒျကာ၊ ဘီယာ ဘာပဲရှိရှိ အကုနျသောကျတာပဲ။
ဘီယာတှလေညျး အမြားကွီးသောကျဖွဈတယျ။ အရကျကို မဖွတျနိုငျတော့တဲ့အခြိနျမှာတော့ အငျတာမီလနျနဲ့ ကြှနျတျော လမျးခှဲခဲ့ရတော့တာပါပဲ”လုိ့ အကျဒရီယာနိုက အတိတျက အမှားတှကေို နောငျတရနတေဲ့လသေံနဲ့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ အကျဒရီယာနိုရဲ့ အမှားတှကေို တတျနိုငျသလောကျ ကာကှယျခဲ့ပမေဲ့ ဘယျလိုမှ မတတျနိုငျတဲ့ အဆုံးမှာတော့ အကျဒရီယာနိုနဲ့ လမျးခှဲဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ရတယျ။
အကျဒရီယာနိုက “အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးကို ကြှနျတျော မူးမူးရူးရူးနဲ့ ရောကျလာခဲ့တယျ။ ဘယျလောကျပဲ မူးမူး အသငျးလကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျကိုတော့ မပကျြမကှကျ ရောကျအောငျ လာခဲ့တာခညျြးပဲ။ အဲဒီအခြိနျကရြငျ အသငျးဆေးအဖှဲ့ဝငျတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို လူနာခနျးထဲကို ချေါပွီး အိပျခိုငျးခဲ့တယျ။ အငျတာမီလနျအသငျးကလညျး ကြှနျတေျာ့မှာ ကွှကျသားဒဏျရာရှိနလေို့ဆိုပွီး သတငျးစာရှငျးပှဲမှာ ကာကှယျပေးခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ကြှနျတျော နားလညျလာတာက ကြှနျတေျာ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ သူငယျခငျြးအပေါငျးတှဟော သူငယျခငျြးကောငျးတှေ မဟုတျဘူးဆိုတာပါ။ သူတို့က ဘာမှ မလုပျဘူး၊ ကြှနျတေျာ့ကို ပါတီတှခေျေါ၊ မိနျးမတှနေဲ့ ပေးတှေ့၊ အရကျတှတေိုကျကွတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ အနာဂတျဆိုတာလညျး မရှိဘူး။ ဘရာဇီးလျကို ပွနျတဲ့အခြိနျမှာ ဝငျငှေ အမြားကွီး လြှော့နညျးခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ပြျောရှငျမှုကိုတော့ ကြှနျတျော ပွနျရခဲ့ပါတယျ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ ဘောလုံးလောကမှာ အခြိနျမတနျဘဲ နဝေငျခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတဈဦးရဲ့ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြပါပဲ။ အကျဒရီယာနိုလို မဖွဈအောငျ တခွားတခွားသော ဘောလုံးသမားတှအေနနေဲ့ သူ့ကို သငျခနျးစာယူဖို့ တိုကျတှနျးရငျး . . .
အကျဒရီယာနိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုမြား
by Ko Kyue . 17 mins ago